Izixhobo ezingafumaneki kwimoto yakho, ekhaya naseofisini | Iindaba zeGajethi
Izixhobo ezingafumaneki kwimoto yakho, ekhaya naseofisini
UMiguel Hernandez | | ngokubanzi
Kukho izixhobo ezazingathandwa kangangexesha elidlulileyo, kodwa namhlanje ngenkqubo yedemokhrasi yedemokhrasi sele ixhaphakile kangangokuba sinokuzibamba ngokulula nangamaxabiso afikelelekayo. Izixhobo zethu ziya zifuna ngakumbi izincedisi ukwenza ubomi bethu bube lula kwaye ke iteknoloji ihamba nathi naphina apho siya khona. Namhlanje ndikuzisele ingqokelela yezixhobo ezithathu ezingabizi ekufuneka zingalahlekanga kwimoto yakho, ekhaya naseofisini, ukuze uchithe usuku lwakho ngemini ngendlela elula, Ngaba uyafuna ukuwafumanisa kunye nam? Apha sikubonisa konke.
1 Itshaja engenazingcingo
2 Itshaja ezininzi ukunqanda "inkunkuma"
3 Idashcam kuhambo lwakho olude
Uninzi lwezixhobo eziziimobhayili esizihlikihla mihla le, nditsho nezo zinamaxabiso asezantsi ithuba lokutshaja ngaphandle kwamacingo Ngomgaqo weQi, umgangatho wokutshaja ngaphandle kwamacingo owamkelweyo uninzi lwezi mveliso. Nje ukuba siqiniseke ukuba i-smartphone yethu, ii-headphone kunye nayo nayiphi na iwatchwatch ehambelana nalo mgangatho wokutshaja. Ngeli xesha sine-Aukey LC-C6, Inoyilo oluncinci kunye nenxalenye ephezulu yerabha ethintela iimveliso zethu ekutyibilikeni. Kwelinye icala, uyilo lusengqiqweni kwaye isebenzisa intambo ye-microUSB yamandla.
Sinokutshaja okukhawulezayo okungenazingcingo okungama-10W, nangona kuya kulawulwa ngokuzenzekelayo kuxhomekeke kwisixhobo esiza kuhlawuliswa phakathi 5W, 7,5W kunye no-10W. Ke ngoko iyahambelana ne-iPhone yamva nje kwaye kunjalo nabanye abaninzi abaqhuba iinkqubo zokusebenza kwe-Android ezinje ngeHuawei P30. Ewe, ukuze sisebenzise i-10W ukutshaja ngokukhawuleza siya kufuna iadaptha yenethiwekhi equlathe i-Quick Charge 2.0 standard okanye inguqulelo yayo engu-3.0 eza kuthi isebenze ngokufanelekileyo nangokukhawuleza ngaphandle kwengxaki.
Inomphambili a Isalathiso se-LED esiya kuthi sivele kobomvu siye kuluhlaza xa sishiya isixhobo esihambelana nayo ngaphezulu. Ikhoyili yokutshaja inkulu kakhulu ngoko ke andikhe ndadibana naziphi na iingxaki zokuyidibanisa. Ine-USB kwi-cable ye-microUSB yemitha efakwe kwibhokisi yemveliso. Iyakwazi ukutshaja i-iPhone X kwimizuzu emalunga ne-180 kwi-7,5W ngezinto ezinomdla, yiyo loo nto ibekwe kwitshaja elungileyo engenazingcingo. Akukho mveliso ifunyenweyo
Itshaja ezininzi ukunqanda "inkunkuma"
Ngalo lonke ixesha kufuneka "sirhuqe" nangakumbi nangakumbi iitshaja, Ngaphandle kwento yokuba uninzi lwayo luphela lusebenzisa ikhebula le-USB lokunxibelelana nesixhobo esiceba ukusibiza, kutheni ... kutheni ungamanyi zonke iitshaja zethu zibe nye? Oku akuyi kusithintela kuphela ekuhlawuliseni ngenani elingapheliyo leadaptha, kodwa siya kuba nakho ukusebenzisa iplagi enye ukubiza yonke into esinokucinga ngayo, ngeli xesha sinikezela itshaja ekhawulezayo yamazibuko amathandathu I-Aukey PA-T11.
Iadaptha enamazibuko amathandathu e-USB, ezine kuzo ngamazibuko ahlakaniphileyo e-AiPower alawula amandla abonelela kwimveliso edibeneyo ngelixa ezimbini zazo ziyahambelana nomgaqo Ukuhlawula ngokukhawuleza i-3.0, Oku kunika iziphumo ze: 3,6 V - 6,5 V 3 A, 6,5 V - 9 V 2 A, 9 V - 12 V 1,5 A kuxhomekeke kwiimfuno zesixhobo sethu. Ukwenza oku, isebenzisa intambo yenethiwekhi esemgangathweni kunye nesingxobo esixineneyo, esilingana entendeni yesandla sakho kwaye siya konga indawo engenasiphelo kuyo yomibini imithwalo yakho nakubhaka wakho, ukuyenza ukuba ibe liqabane elifanelekileyo lokuhamba.
Amandla ayo aya kusivumela ukuba sihlawulise izixhobo ezinje nge-Apple iPad kunye nazo zonke iintlobo zee-smartphones. Njengoko kuhlala kusenzeka ku-Aukey, lIindlela zokhuseleko ezihlanganisiweyo zikhusela izixhobo zakho kwizinto ezigqithileyo ngoku, ukugqithisa ubushushu kunye nokulayisha ngaphezulu. Akukho mveliso ifunyenweyo Ngokunyaniseka, ukuba uphatha izixhobo ezininzi kubomi bakho bemihla ngemihla, lukhetho olunobulumko ukukhetha ukudibanisa iindawo zokutshaja kwenye, ngaloo ndlela ugcine indawo, imali kunye nokufumana inkululeko.
Idashcam kuhambo lwakho olude
IiDashcams ziikhamera ezibekwe kwifestile yemoto yethu kwaye zirekhoda kwiluphu kwaye amaxesha ngamaxesha kwenzeka ntoni endleleni. Kwamanye amazwe, njengeRussia, athandwa kakhulu. Nangona kunjalo, ngokuhamba kwexesha baye bafikelela ngakumbi nangakumbi kuyo yonke indawo, ixabiso lehle kakhulu kwaye akuqhelekanga ukubabona phantse naphina. Ezi ndidi zekhamera zinokusetyenziselwa ukucacisa iingozi nokunye okuninzi, nangona kufuneka zisoloko zisetyenziselwa ukuhlonipha ubumfihlo babanye nangokuhambelana nemithetho yelizwe ngalinye.
Kule meko u-Aukey unemodeli ye-DRA1, idashcam ehambelana ngokufanelekileyo ekwazi ukurekhoda ebusuku kunye nesisombululo se-FullHD. ukufumana ezona ziphumo zibalaseleyo ngawo onke amaxesha. Oku kuneentlobo ezimbini zokurekhoda: Ukurekhodwa okungxamisekileyo kuthimba ngokuzenzekelayo naziphi na iziganeko ezingalindelekanga ngelixa uqhuba kwaye ukhusela ushicilelo. Kwelinye icala, ukurekhodwa kwe-loop kuvumela ukusetyenziswa okuqhubekayo ngokubhala kwakhona izinto ezindala ezingeyomfuneko kwaye ke sisebenzise indawo ekhoyo kwimemori khadi esiyifakileyo kwisixhobo ekuthethwa ngaso.
Le khamera inoyilo oluncinci, isikrini esingaphantsi kweesentimitha ezintathu kunye nofakelo olulula. Inesibuko sokutshaja imoto esemgangathweni kunye nofakelo kulula kakhulu. Inyani yile yokuba ayicaphukisi ukuqhuba ngezi ntlobo zekhamera kwaye zinokukusindisa kwizinto ezoyikisayo ezingaphezulu kwesinye, ke ukuba uqhele ukuthatha uhambo oluninzi, akuyi kuba buhlungu ukufumana enye yezi. Akukho mveliso ifunyenweyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izixhobo ezingafumaneki kwimoto yakho, ekhaya naseofisini
Sharkoon Skilller SGM3, imouse yokudlala enexabiso elifanelekileyo lemali
Kusemthethweni, iApple izakuveza i-iPhone yayo entsha ngoSeptemba 10